MyLingo101 - ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းပလက်ဖောင်း
စာရင်းသွင်းပါ / ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ စတင်သင်ကြားပါ
အစပြုသူ, အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်။ သငျသညျပြီးပြည့်စုံသောဆရာကိုတွေ့လိမ့်မည်!
ဘာသာစကားများ တရုတ်, Mandarinအဂၤလိပ္ပြင်သစ်ဂျာမန်ဂရိအီတလီဂျပန်ကိုရီးယားပေါ်တူဂီစပိန္
ဒါ့အပြင်ပြော အဘိဓါန် Afrikaansတရုတ်, Mandarinတရုတ်, Yue Yue Chinese အဘိဓါန်အဂၤလိပ္ပြင်သစ်ဂျာမန်ဂရိဥစာဟိန်ဟန္ေဂရီအီတလီဂျပန်ဂြာဗားနီးကိုရီးယားရှပေါ်တူဂီအဘိဓါန် RomanianရုရွားSerbo-Croatian-စပိန္ထိုင်းတူရကီဗီယက်နမ်ဇိုဇူလူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့သင်ကြားရေးသင်တန်းများ၊ ကလေးသူငယ်သင်ခန်းစာများ၊ စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်း၊ စာမေးပွဲပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများပေးနေသောကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများကိုကြည့်ပါ။
$ 15 ကနေစတင်သည်
တောင်အာဖရိက၊ Cape Town
ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုဂျူလီဆရာနှင့်အတူလေ့လာပါ။ ကိုရီးယားဘာသာရင်း * သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ * FUn / FUn *
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများပြောဆိုရာကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အတွေ့အကြုံသည်အမှန်တကယ်မည်မျှရှိသည်ကိုရိုးသားသည့်အမြင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများထံမှပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သန့်ရှင်းပြီးသွားလာရန်လွယ်ကူသည်၊ အရောင်များသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ကမ်းလှမ်းထားသောသင်ခန်းစာများသည်လည်းတတ်နိုင်သည်။
Mariana marfuz ကြောငျးသား
Great platform! အဆက်အသွယ်ပုံစံကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့်ဖြည့်စွက်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘာသာရှာဖွေရန်မလိုဘဲကျွန်ုပ်အားအကောင်းဆုံးသင်ကြားပေးသည့်ဆရာကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
John Smith ကြောငျးသား
"Mylingo101 ကိုချစ်သောသူ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအရာအားလုံးသည်အလွယ်တကူအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီး admin ၏ထောက်ခံမှုသည်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဤ platform ပေါ်တွင်သင်ကြားခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပါသည်!"
ဂျေမီ - အန်း ဆရာမ
ဆရာစာရင်း၏စာရင်းကိုရှာဖွေပြီးအချိန်နှင့်ဘာသာစကား ဦး စားပေးမှုများနှင့်သင်နှင့်လိုက်ဖက်သောအရာကိုရှာဖွေပါ။
သင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသောနေ့နှင့်အချိန်၌သင်၏ဆရာနှင့်အွန်လိုင်း ဆက်သွယ်၍ သင်ခန်းစာပြီးအောင်။
သင်ရှာဖွေနေသည့်အချိန်ကိုရှာ။ မရ၊ ပြဿနာမရှိပါဘူး! မင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးပါရစေ။ သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပေးပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောဆရာများနှင့်သင်ဆက်သွယ်မှုများကိုသင့်ထံပို့ပေးပါမည်။
မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြပါဖြေ - ဘယ်လိုသင်ခန်းစာမျိုးတွေရချင်ပါသလဲ။ ဘာဘာသာစကားလဲ သင်က Native သို့မဟုတ် Native Native ဆရာမလိုချင်ပါသလား။ သင်ခန်းစာယူရန်အတွက်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကဘာလဲ။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်နှင့်ဘယ်အချိန်မှာသင်သင်ချင်ပါသလဲ။
ဝင်ခဲ့လေ ထိတှေ့ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ။
အင်္ဂလိပ်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ / ဂလိုဘယ်ဘာသာစကားဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။
အလှည့်ကျ ဖြေ - ဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲ
Scribendi မှရေးသားသည်။ အမြန်အဖြေ:“ A” သို့မဟုတ်“ an”? “ A” ကိုအသုံးပြုခြင်းစကားလုံးများရှေ့တွင်“ a” ကိုသုံးပါ
အများဆုံး 10 ESL အမှားများ
Scribendi မှရေးထားသည်။ ESL အမှားများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နှင့်ပတ်သက်သောအကြံပြုချက်များဘယ်နေရာမှာမဆိုကြပါစို့
အသုံးများသော English Idioms နှင့်စာပိုဒ်တိုများ
Jimei Perry မှရေးသားသောစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများသည်ဤအရာများမရှိလျှင်အလွန်ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မည်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
သင့်ရွေးချယ်မှု၏ဘာသာစကားကိုလေ့လာရန်အလွန်ကောင်းသောပလက်ဖောင်း။ ဆရာတစ်ယောက်ရှာပါ၊ သင်ခန်းစာစာအုပ်ယူပါ။
တစ် ဦး Affiliate ဖြစ်လာ (တစ်သက်တာကော်မရှင်)
အီးမေးလ် :: info@mylingo101.com
© mylingo101.com 2020 All Rights Reserved ။